5 amin'ireo endri-tsoratra ombelahin-tongony tsara indrindra ao amin'ny WWE & AEW - Wwe
5 amin'ireo endri-tsoratra ombelahin-tongony tsara indrindra ao amin'ny WWE & AEW
Hatramin'ny nanombohana ny tolona matihanina dia nisy karazana mpanao mpanao tolona roa samy hafa - ny toetran'ny ombelahin-tongony sy ny toetran'ny tarehy. Hulk Hogan dia azo raisina ho endrika stereotypical amin'ny tolona tamin'ny 1980. Na izany aza, ny toetran'ny ombelahin-tongony stereotypical dia azo inoana fa olona toa an'i Ric Flair. Na tianao i Flair na i Hogan, dia nahaliana azy ireo izany ary nijery hatrany ireo mpankafy.
Nandritra ny taona 1990, WWE sy WCW dia niady ho an'ny laharana ambony indrindra. Na izany aza, mpankafy tolona no nahazo tombony. Ireo tia an'i Stone Cold Steve Austin sy ny NWO dia nanaitra ny mpankafy azy avy. Ny fampiroboroboana tsirairay dia niantehitra betsaka tamin'ny ombelahin-tongony sy ireo mpiatrika ny fahombiazany.
Azo heverina fa ho faty i WWE sy WCW raha tsy teo ireo endri-tsoratra lehibe ireo. Ankoatr'izay, raha tsy misy ireto mpilalao fototra ireto dia tsy ho nahita ny lalao niavaka na fotoana tsy hay hadinoina toy ny tao amin'ny horonantsary etsy ambany ireo mpankafy.
Ka noho izany, amin'ny alin'ny alin'ny alarobia vaovao, iza ny sasany amin'ireo mpilalao ombelahin-tongony tsara indrindra ao WWE sy AEW ankehitriny?
# 5 - WWE Superstar Lacey Evans
Lacey Evans dia nampifanaraka ny tenany tamin'ny ombelahin-tongony tsara indrindra teo amin'ny tantara, Ric Flair.
Lacey Evans dia nanatevin-daharana ny WWE NXT tamin'ny 2016. Na izany aza, maro ny olona no tsy mahatsapa fa Etazonia izy taloha. Miasa tsikelikely amin'ny marika NXT, nahita fahombiazana voalohany i Evans nandritra ny Mae Young Classic, nahatratra ny fihodinana faharoa. Na izany aza, esorin'i Toni Storm izy.
Tamin'ny taona 2019, i Evans dia nasandratra ho lisitra lehibe, niasa tamin'ny WWE RAW sy WWE SmackDown Live. Evans dia isaina faha-23 amin'ny lisitra PWI ho an'ireo mpiady vehivavy 100 ambony amin'ny 2019, indrindra noho ny fifanolanana nataony tamin'i Becky Lynch.
Evans dia azo lazaina fa iray amin'ireo vehivavy mpiady mendrika indrindra mbola nahazo ny tompondaka. Ny asany mandritra ny fizarana promo dia tena mahavariana. Miasa amin'ny maha-mpilalao ombelahin-tongony azy, i Lacey Evans dia nifanindran-dàlana tamin'i Ric Flair tao anatin'ny fizarana iray farany tamin'ny WWE RAW ary nifamaly tamin'i Charlotte Flair izy roa tonta. Vao haingana koa i Evans no nanambara ny fitondrana vohoka azy tamin'ny RAW, izay nahagaga ny mpankafy WWE nijery tao an-trano.
maninona ianao no tokony ho tia ny reninao
wwe 2016 karama isaky ny fahitana
ny fomba hahatonga ny vehivavy hahatsapa ho voaro
ny fomba famelana sy hatoky ny fifandraisana
maninona aho no mitsentsitra ny zavatra rehetra
maninona ny mpivady no misaraka ary miverina miaraka